na-elekọta ndị agadi na-elekọta ndị agadi na-elekọta ndị agadi
Gosi obi gi ma mee ihe di iche
Ị ga-amụta ụzọ kacha mma ị ga-esi nagide onye na-elekọta ya (ma ụmụaka ma ndị agadi) na mkpa ha kpọmkwem. Ị na-eme otú ị ga-esi jiri usoro ịwelite na ịwelite usoro iji rụọ ọrụ gị n'ụzọ ergonomic. Ị ga-amụta otu esi arụ ọrụ na faịlụ nlekọta ma ị ga-enweta ihe ọmụma niile dị mkpa gbasara foto ndị nwere nlekọta. Ilekọta ọzụzụ na agụmakwụkwọ oge ụfọdụ bụ nkwadebe zuru oke maka usoro nlekọta ahụike. Enwere oké ọchịchọ maka ndị nlekọta na-elekọta ndị agadi, ndị nlekọta na nlekọta ụlọ. Mgbe ọzụzụ gị nwere ike ịmalite ozugbo n'ihi na ị nwere ọtụtụ ahụmahụ bara uru. I nwekwara ike ịmụ ihe n'ihu.
Anyị na-enye onye nlekọta ọzụzụ na usoro abụọ. Ịmụmụ ihe abụọ pụtara na ị na-amụta ọrụ gị n'ụlọ akwụkwọ na n'ebe ọrụ. A ga-akwụ gị ụgwọ maka ụbọchị ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ọrụ nkwekọrịta oge, onye ọrụ ahụ na-akwụ gị ụgwọ ruo euro 850 kwa ọnwa.
Ị bụ onye nlekọta
Ị na-achọ oge ọrụ mgbanwe
A ọzụzụ na-ewe nkezi abụọ ruo afọ atọ.
De ọzụzụ na-elekọta na akụkụ-oge mmụta bụ a linear omume nke pụtara na ị pụrụ iso mgbe ọ bụla nke afọ ma na ị dị nnọọ nwere ike gụchara on June 30.
Ọzụzụ bụ ezigbo nkwadebe maka ọzụzụ ọkachamara ahụike.
Iji nweta akwụkwọ nyocha, ị ga-enwerịrị ikike nke Ngwadogwu Wet nweta. I nwere ike imezu ihe ndị a na anyị. Ọ bụrụ na ịnwere ihe ọmụma na Nutrition & Care, ị nwere ike ịme ihe ndị dị na Nlekọta anya.
Ịmara nke Dutch bụ ihe a chọrọ, ebe ọ bụ na nkwurịta okwu na onye nlekọta na-elekọta na ndị otu gị dị ezigbo mkpa.
Ị nwere oge ọrụ ọrụ mgbanwe na ị na-arụkarị ọrụ. Nke ahụ pụtara ọrụ mbido na nke mbubreyo na izu ụka kwa!
Ilekọta bụ ọrụ gbasara elekọta mmadụ. Ị na-ejedebe na otu ndị nlekọta na ị ga-arụ ọrụ na ya. Gị na ndị nlekọta na-elekọta, ndị dọkịta, ndị ezinụlọ na ndị ọrụ afọ ofufo na-akpakọrịta. Ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ezumike nká ma ọ bụ n'ụlọ ndị agadi. Mgbe ụfọdụ, ị na-arụkwa ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ ike.
Ọrụ gị ga-akawanye ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-elekọtakwa nke ọzụzụ ọkachamara ahụike nke a. Ị ga - enweta visa si n'aka ndị na - ahụ maka ahụike, nke na - eme ka ị nwee nchegbu banyere ngalaba nlekọta.
Ị nwere ike ịchọta ọrụ na ụlọ ezumike, ebe obibi na nlekọta, nlekọta ụlọ, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ndị nkwarụ.
A na-edozi mpaghara a. Ị na-enweta ụgwọ dịka Barema si kwuo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ọnụọgụ ego, jụọ onye ọrụ ndụmọdụ anyị. Ụgwọ na ọnọdụ gbanwere ngwa ngwa ma dabere na ọnọdụ nke gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-amụ ihe mgbe ị natachara akwụkwọ na diploma gị, mgbe ahụ, usoro nọnye na mgbe ọ bụla, nọọsụ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ.
Ebee ka ị ga-enweta ahụmahụ?
Ị nwere ike ịga na mmemme ahụ elekọta site na ịrụ ọrụ ahụmahụ nweta na:
ebe obibi ebe obibi (ụlọ ezumike)
Ndị Nkwarụ / Ndị Achịbidoro
ụlọ ọgwụ psychiatric / psychiatry
Ọzụzụ Na-elekọta oge agụmakwụkwọ oge niile
Ị na-amụta na-arụ ọrụ na a na-elekọta otu na n'okpuru nlekọta nke nurse. Ị na-eso a na-elekọta atụmatụ na ị pụrụ ọbụna ime otú n'okpuru nlekọta nke nurse ụfọdụ nwa ara na-aga-eme: onu elekọta, aka na-ewere ọgwụ, atụ usu, ndekọ ahu okpomọkụ, na-mmamịrị samples, ... na-anabata iwu, na-amụta alo na akuko na-akụkụ nke gị ọzụzụ .
Ị na-amụta na-gaa na akaụntụ ahụ, psychological, socio-relational na nke mmetụta uche na steeti nke onye na-achọ na-elekọta. Mgbe ụfọdụ, ị na-ele anya na mgbanwe dị mkpa ị chọrọ ịkọ. Ị na-amụta mgbe gị ọmụmụ otú olu ike i nwere ike na-eme ihe-akwanyere omenala nke na-elekọta nnata, ya àgwà, ya àgwà, ...
Ị ga-ahụ maka ịkwaga onye nlekọta na-azaghachi nke ọma na ọnọdụ mberede na itinye usoro enyemaka mbụ.